ပြဇာတ်မင်းသား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » ပြဇာတ်မင်းသား	16
Posted by nozomi on Aug 8, 2016 in Drama, Essays.. | 16 comments
သမီးငယ် နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကို
အခန်းကိုယ်စားပြု အားလုံးရှေ့ ထွက်ပြီး စမ်းသပ်ပြ ရှင်းပြဘို့ ကို
တက်တက်ကြွကြွနဲ့ တိုင်ပင် ကြ အပြင်ကို ပစ္စည်းတွေ စုံစမ်းကြ
လုပ်နေတာတွေ့တော့ ဘာမှ ၀င်မစွက်ပဲ အသာကြည့်နေရင်း
မိဘတစ်ဦး အနေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ တက်ကြွမှု စူစမ်းချင်မှုအတွက်
၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရင်း ငယ်ငယ် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေထဲ က
အမေပြောဘူးတဲ့ အဖြစ်တစ်ခု ချက်ချင်း အတွေးထဲ ပေါ်လာတယ်…
၁၉၇၀ လောက်ကပါ ..
မိသားစု မှာ အမေ က အလတ် အကိုတွေ မောင်တွေ ညီမတွေ ရှိတယ်
ဇတ်လမ်းထဲက ဇာတ်လိုက်ကျော်က ကပ်ရပ် မောင်ငယ်ပေါ့
အားလုံးက ချစ်ပေမဲ့ ဂျစ်တိုက်တတ်လွန်းလို့
အိမ်မှာတော့ ဂျစ်တူး အမည်တွင်ပါတယ်
အဲဒီအချိန် အကြီးဆုံး ဦးလေး က အဘိုးတို့ မြို့မှာပဲ ရဲအရာရှိ နဲ့ တာဝန်ကျတယ်
ဦးလေးတူးက ရွာငယ်လေး တစ်ခုမှာ ကျောင်းဆရာ ၀င်လုပ်နေပါပြီ
အဲဒီ ခေတ် အခါ က အခုခေတ်လို ဖျော်ဖြေရေး မပေါပဲ
တနှစ်တခါ ရွာဘုရားပွဲ မှာ စု က ကြတဲ့ ပြဇတ်လေး သာ ကြည့်စရာရှိတဲ့ အချိန်ပါ
တစ်ရက်တော့ ဦးလေးတူး က သူတို့ ရွာ မှာ ဒီ နှစ် ပြဇတ် က မယ်
သူ က ပြဇတ် တာဝန်ခံ ၊ ဒါရိုက်တာလဲ သူ၊ ပြဇတ်ထဲလဲ ၀င်သရုပ်ဆောင် မယ်
သူ ရဲ့ ပွဲ ကို လာကြည့်ပါ လို့ မိသားစုကို ခေါ်ပါတယ်
ပြဇတ်အရ သရုပ်ဆောင်ဘို့ အကိုကြီး ဆီကလဲ ရဲအရာရှိ ၀တ်စုံငှားပါတယ်
မင်း က ဘယ်အခန်းက ပါမှာလဲ ဆိုတော့ ကြိုပြောရင် ဘယ်ကောင်းမလဲ
ဟို ရောက်မှ ကြည့်ဆိုတော့ မိသားစုတွေက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ချင် နေကြပြီ
ပွဲ နေ့ ကျတော့ အစောကြီးထဲက မိသားစုလိုက် လှည်းနဲ့သွား နေရာဦးပေါ့
သားတော်မောင် ကို မတွေ့လိုက်ရမှာစိုးလို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေကြတာ
ပြဇာတ် စ က ပြီ ဆိုကတဲက အားလုံးက အိမ်က မင်းသားချော
ဘယ်အချိန်ထွက်လာ မလဲ ကြည့်နေကြတာ အဘိုးကလဲ မြင်ရင်ငါ့ ပြောပါဦး ပေါ့
ဇတ်လမ်းက ရွာမှာ တာဝန်ကျတဲ့ ကျောင်းဆရာလေးနဲ့ ရွာခံဆရာမလေး တို့အကြောင်း
စာသင်တာတွေ ရွာ ဓလေ့ ရွာ့ ဟာသတွေ နဲ့ မို့
အမေ့ အပြောအရတော့ အဲဒီနှစ် ပြဇတ်က တော်တောင်ကောင်းတယ်
အောက်က လဲ လက်ခုပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ လက်ခုပ်သံကြားလေ
အဘိုးကလဲ ငါ့သားလက်ရာဆိုပြီး ခပ်ပြုံးပြုံး နဲ့ သဘောကျလေပေါ့
ပြဇတ် တ၀က်လောက် ရှိသွားပေမဲ့ အဲဒီ ကျောင်းဆရာ နေရာမှာ ဦးလေး မဟုတ်
ဘယ်အခန်း မှလဲ မပါသေး ဖြစ်နေတယ်
ဆရာမလေး ကို တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးက ဓမြ ဖြစ်ပြီး ရွာကို
၀င်တိုက်တော့ ရဲတွေ ရောက်လာရော ..
မောင်တူးတော့ ပါပြီ ဆိုပြီး သေချာကြည့်နေတာ အဲဒီ မှာလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး
ပြဇတ်သာ ပြီးတော့မယ် ဘယ်အခန်းကမှ မပါတော့ မိသားတစ်စုလုံးကလဲ
ဖင်တကြွကြွ ပေါ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ၀င်လာမလဲ သိချင်နေကြပြီ
တစ်ခန်းကျ ကျောင်းစာသင်ခန်းလေး ဘေး သူတောင်းစားတစ်ယောက် က
တနားကျပါ ခင်ညာ လုပ်နေတော့ ဆရာက သူ့တပည့်တွေကို ပညာကို
သေချာ သင်ကြ စာ မတတ်တော့ ဟို သူတောင်းစားကြီး လို ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာမျိုး
ပညာပေး အခန်းလေး လဲ ပါသေးတယ်
မိသားစု တွေကလဲ အခုထိ ထွက်မလာသေးတော့ ကြည့်က လဲ ကြည့်ချင် စိတ်ကလဲ
မရှည် ဖြစ်လာကြတယ် ၊ အဲဒီအချိန် ဦးလေး ကို အမေက စတွေ့တာ ဟာ ဟို မှာ
ကိုတူး ကိုတူး ဆိုတော့ အားလုံးကလဲ ဘယ်မှာလဲ ပြကြပါဦး ငါ တို့ တော့ မတွေ့ပါဘူး
အမေက ဟို မှာ လေ တနားကျပါ ခင်ညာ ပြောနေတဲ့ သူတောင်းစားက ကိုတူး ပေါ့
သေချာကြည့်တော့ အဟုတ် ဗျာ ရုပ်က သူတောင်းစား နဲ့ တူအောင် ဖျက်ထား တာ ကို
အဘိုးဆိုတာ ဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ အသားတွေ တုန် ချက်ချင်းကို အိမ်ပြန်ရော
ဦးတူးလဲ အိမ်ကို တပတ်လောက်ပြန် မလာရဲဘူးတဲ့..
အခုတော့ ပြဇတ် သွားကြည့်ကြတဲ့ အဘိုး အဘွား ရော အမေ နဲ့ ဦးလေးတူ ပါ
ဆုံး ကုန်ကြပါပြီ ယူနီဖောင်း ငှားလိုက်တဲ့ ဦးလေး အကြီးဆုံးတော့ ရှိသေးရဲ့
ဦးလေးကြီးတော့ ဒီ အဖြစ်ကို မှတ်မိပါဦး မလားတောင် မသိတော့ဘူး
ကျနော်တော့ ကိုယ်တိုင် မမြင်ဘူးပေမဲ့ အမေ အပြောကောင်းလွန်းလို့ အခုထိ
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့ ရသလို မျက်စေ့ထဲ မြင်နေတုန်း ၊ တစ်ခါတစ်လေ လဲ
မြင့်မြင့်မားမား မျှော်လင့်ထား တာမျိုးကနေ စိတ်ကူးထဲတောင်
မတွေးထားတဲ့ အဖြစ်တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့နေရတုန်းပါ …
မကောင်းတာ မတွေးနဲ့ မကြံနဲ့ မလုပ်နဲ့ ၊
View all posts by nozomi →	Blog
ဂျစ်စူ says: ဇာတ်နာလိုက်တာ ဦးဂျစ်တူးရာ
ဦးမှိုကြီးဆို အနဲဆုံး ဗီလိန်ခန်းလောက်တော့ ပါမှ
သရုပ်မှာ နော…အူးလေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ဟုတ်ပ စိန်မျောက်လေး ရယ်
မင်းသမီး ကို အနိုင်ကျင့် ရတဲ့ လူဆိုး ဆို ဟုတ်သေး
ဘယ်သူ့ မှ ခိုင်းမရ လို့ သူ ကိုယ်တိုင် ဝင်လုပ်ရတာ နေမှာ
ဦးကျောက်ခဲ says: လူ့ဘဝဆိုတာ ဇာတ်ညွှန်းကြိုတင်မသိရတဲ့ ပြဇာတ်ဆိုတော့လည်း အခက်သားဂလား…
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဝထ္ထုတိုတစ်ပုဒ်မှာ ရုပ်ချောပြီး ဆိုးတဲ့ကျောင်းသားကို လူကောင်းဇာတ်လိုက်မင်းသား ၊ ရုပ်ဆိုးပြီး လိမ္မာတဲ့ကျောင်းသားကို ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ကျောင်းပြဇာတ်မှာ သရုပ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်တာ ၊ လူဆိုးကျောင်းသား လူကောင်းဖြစ်သွားတာလေး အမှတ်ရမိတယ်ဗျ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ဆြာကျောက်စ် က ရုပ်ချော တဲ့ လူကောင်း ဇာတ်လိုက် ဆိုတာ သေချာတယ်
black chaw says: ကျွန်တော်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ လုပ်တဲ့ ပြဇာတ်မှာ
နေရာကောင်းကောင်းမယူပဲ (နေရာကောင်းက လူကြိုက်များတယ်လေ)
သူတောင်းစား အခန်းက အနစ်နာခံပြီး ၀င်သရုပ်ဆောင်ပေးတဲ့
ကိုတူး ကို ချီးကျူးချင်ပါတယ် ကိုနိုကြီး ရေ…။
မမချွိ says: ဟုတ်တယ်၊
ကိုဘက် ပြောတာ သဘောတူတယ်။ (ဒါက ပို့(စ) နဲ့ ဆိုင်တာ ပြောတာ)
မဆိုင်တာ ပြောရရင် ကိုဂျီးနိုကို လွမ်းနေဒါးးး
nozomi says: တနားကျပါ အချစ်တွေ ရှိသေးရင် နဲနဲလောက် ပေးခဲ့ ပါ ခင်ညာ
kotun winlatt says: တနားကျဘာ ခင်ညာ . . .
အဲလေ . . .
တော်သေးတာပေါ့ ဟိုပုံပြင်ထဲက ”ဒို့လူလေးများဆိုသလေ ဝေလေလေ ဆိုတာမျိုးထက် သာသွားသေးတာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကိုတူးကမာန်မာနမရှိတာချီးကျူးစရာ။
kai says: “ဒို့လူကလေးများဆိုသလေး… ဝေလေလေ”.. ကိုသတိရမိတယ်.။
အဲဒီမှာလည်း.. သားတော်မောင်ပျောက်နေလို့.. ကြည့်တာ.. ကြည့်တာ…
နောက်ဆုံးကျ.. ဝေလေလေအော်ရတဲ့အခန်းမှာ ပါနေတယ်ဆိုတာပဲ..။
တကယ်တော့ ဘ၀ဇတ်ခုံက.. ပိုဆန်းကျယ်ပါတယ်..။
ဝေလေလေတွေ.. ဘုရင်တက်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေတာမျိုး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: ကိုချောရေ
ငယ်ငယ် ကတော့ လူငယ်စိတ်နဲ့ နေရာကောင်းလေးမှာ ပါစေချင်တာပေါ့ ကြီးလာတော့ သူ ဘာကြောင့် ဒီ လို လုပ်ခဲ့လဲ သဘောပေါက်သလိုရှိလာတယ်
ကိုချောဆို ဘယ် အခန်းက ပါချင်လဲ ဗျ
ဝေ လေလေ ထက် သာလို့ တော်သေးတယ် ပြောရမယ်
သူများတွေ မလုပ်ချင်လို့များ ဝင်လုပ်ခဲ့ရတာလား မသိပါဘူး
ဒါ ဆိုရင်တော့ အနုပညာမာန ရှိတယ်ပြော ရမယ်
အခုအရွယ် မှ စဉ်းစားမိတာတော့
နေရာကောင်း က ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်၏ မသင့်တော် ၏ မစဉ်းစား ပဲ
လုပ်ချင်တဲ့သူများပြီး နေရာ လု ကြ လို့သာ ပြဇာတ်ကြီး က ကြည့်မကောင်း အီလည်လည် ဖြစ်နေတာ
လုပ်ခွင့် ရတဲ့ နေရာ ကိုသာ ကျေနပ် စွာ နဲ့ တာဝန်ကျေအောင် လုပ်ကျရင်
ပျှော်စရာ ပတ်ဝန်းကျင် အောင်မြင်တဲ့ ပြဇာတ် တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ
လုံမလေးမွန်မွန် says: စာမတတ်ရင် သူတောင်းစားဖြစ်မယ် ဆိုတာက ခုဆို ခေတ်မမီတော့ဘူး . . . ဟီး
Thint Aye Yeik says: .မျှော်လင့်မထားတာတွေက …မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်လာတတ်တယ်…ဆိုတာ…
ယုံရမှာပဲ။ .မျှော်လင့်ထားတာတွေကရော… ဘယ်အချိန် ဖြစ်လာမှာတုန်း…
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: လူ့ဘ၀ဆိုတာလည်းပြဇတ်တစ်ခုလိုပဲနော..ကျရာအခန်းကပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုတယ်
nozomi says: လုံမလေး
စာတတ်ပြီး ဖြစ်နေသူတွေ လဲ ရှိတာပေါ့ ပေါ မှ ပေါ
မျှော်လင့်ထားတာတွေက မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန် မှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ရော မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ပါ ဖြစ်ချင်သလို ကို ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ မျှော်လင့်လိုက်ပါ ဆြာမိုက်
ဟုတ်ပါ့ ငြင်းလို့ မရမဲ့ အတူတူ မင်းသားမဖြစ်တောင် အကယ်ဒမီ ရမဲ့ ဇာတ်ပို့ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တာပေါ့
uncle gyi says: သူဒါရိုက်တာဆိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့အခန်းသူလုပ်လိုက်တာ